သင် "ဒူး" ရှိပါတယ်လျှင်ဘာလုပ်ရမှန်း - အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစက်ဘီး fit ရရှိထားသူ
စက်ဘီး | အားကစား
စက်ဘီးအားလုံးမှာကျန်းမာရေးခံနိုင်ရည်အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော cardio ယလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်စက်ဘီးစီးခြင်းမထိုက်မတန်ကိုစောင့်ရှောက်အဘယ်ကြောင့် - ခိုင်မြဲစွာကုန်းနှီးအတွက်
သုံးကျန်းမာသန်စွမ်း၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30 မိနစ်အဆလေးဖို့ခြေနင်းအတွက်အပတ်စဉ်တွေ့ဆုံဘယ်သူကောင်းတစ်ဦးဆယ်နှစ်အားဖြင့်ကျန်းမာရေးအတွက်မိမိအသက်ကိုရှည်အောင်နိုငျသညျ။
ယင်းကုန်းနှီးစက်ဘီးနေချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ပတ်ပတ်လည် 75 ရာခိုင်နှုန်းကစတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အဆစ်ခြေထောက်ပေါ်တင်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်။
ဒါကြောင့်စက်ဘီးလည်းအထူးသဖြင့်အဝလွန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်။ ရွရွပြေးဖို့ကောင်းတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်မလိုချင်တဲ့ flab စက်ဘီးအကျိုးရှိသက်ရောက်သည်။
တစ်ဦးက 75 ကီလိုဂရမ်လေးလံလူတစ်ဦးတစ်နာရီအကြာတွင်ပျမ်းမျှအားမောင်းနှင်မှုမြန်နှုန်းမှာပြီးသား 720 kilocalories လောင်ကျွမ်း။ ဒါကချောကလက် bar မှာဖြစ်ပါတယ်ထက် ပို. ဖြစ်ပါတယ်။
လူအတော်များများဟာစက်ဘီးစီးခြင်းအပြင်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဘေးဒဏ်သင့်ပူးတွဲအရိုးနုတတျနိုငျသကြောင့်စိုးရိမ်နေကြသည်။ သို့သော် orthopedists အားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေး: အအရိုးနုမှအာဟာရ၏ဒူးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ယူနီဖောင်းလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်တိုးတက်နေသည်အဖြစ်ဆန့်ကျင်ဘက်, အမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ပူးတွဲဆေးတောင့်နှင့်အ meniscus အကျိုးအတွက်။
တောင်မှ varicose သွေးပြန်ကြောထဲကနေခံစားနေရပြီးသူများ, စက်ဘီးစီးခြင်းအပေါ်ထွက်လက်လွတ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး။ အဆိုပါသွေးပြန်ကြောအသွေးနှလုံးတစ်စုပ်စက်ဆင်တူခြေထောက်သွေးပြန်ကြောအတွင်းယူနီဖောင်း footwork ဖြင့်မောင်းနှင်နေသည်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏဆိုမူးယစ်ဆေးထက်တောင်ပိုကောင်းရှိပါတယ်။
တစ်သိသာကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာအပတ်စဉ်ကအနည်းဆုံးနှစ်နာရီစက်လီးစီးခြင်းရပါမည်။ အဆိုပါပမာဏတဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသက်ရှုထဲကရတဲ့မပါဘဲ, အလတ်စားကျမ်းပိုဒ်မှာကန်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်အခြေအနေကိုအာူး။
foreground ကအတွင်းအရှိန်အဟုန်လျှင်, ဒါခေါ်ကြားကာလလေ့ကျင့်ရေးအကြံပြုသည်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာနှင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည်မြန်နှုန်းအခြားတိုင်းငါးမိနစ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အသေးစားလပ်ချိန်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျအလတ်မြန်နှုန်းမှာရှည်လျားသောအကွာအဝေးမောင်းနှင်နေလျှင်, အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စက်ဘီးစီးအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့အကောင်းဆုံးအားကစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလိုအလြောကျအောက်စီဂျင်၏နေ့စဉ်အဘို့ကိုကိုင်တွယ်နဲ့အလွယ်တကူနေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ပေါင်းစည်းထားနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်စျေးဝယ်ဘို့ရန်လမ်းမသက်ဆိုင်ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေး၏ဖုံးလွှမ်းစေနိုင်သည်။
စကားမစပ်: ထိုသို့သောစောင်ရေလေ့ကျင့်ရေးသင့်ရဲ့ခြေချောင်းအပေါ်လိင်ဟော်မုန်းတတ်၏။ စက်ဘီးစီးပိုကောင်းချစ်သူများဖြစ်ကြောင်းကောလာဟလများရှိပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားသေးသို့သော်ထိုသို့မတည်ရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီမှထွက်မှတက်မယ့်.
အားကစားနှင့်အတူ Remove - နေ့စဉ်အသက်တာ၌အားကစား | ကြံ့ခိုင်ရေးအစားအသောက်များတွင်
အားကစားနှင့်အတူ Remove | အားကစား & အစားအသောက်
လက်ျာအားကစားဝတ်စုံ / အားကစား & Fitness
ကလေးများများအတွက်လှုပ်ရှားမှု | ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး
ကလေးတွေကအဘို့ကိုယ်ခံပညာ | အားကစား
မြားပစ် | အားကစား
အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်သင်တန်း | အားကစား
အားကစားနှင့်အတူအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ဘယ်လို | ကြံ့ခိုင်ရေးအစားအသောက်များတွင်
အားကစားအိပ်မက်ကိန်းဂဏန်းပိန်စေနှင့်အတူ | ကြံ့ခိုင်ရေးအစားအသောက်များတွင်